समाचार - कसरी एक stroller छनौट गर्ने?
बच्चा क्यारिजको आकार पहिलो कारक हो जुन मानिन्छ। यदि यो धेरै सानो छ भने, यो पक्कै पनि असम्भव छ, किनभने शिशु शैशवकालमा धेरै छिटो हुर्कन्छन्, यदि तस्वीर सुविधाजनक छ भने, तपाईं तुलनात्मक रूपमा सानो प्रम किन्नुहुनेछ। केही महिना पछि, तपाईले पाउनुहुनेछ कि बच्चाको बृद्धि संगै यो अनुचित हुन्छ, र तपाईले नयाँ किन्नु पर्छ। अवश्य पनि, आकारको समस्याले फोल्डिंग पछि आकार पनि समावेश गर्दछ। यदि तपाइँ बच्चालाई बाहिर लैजानुहुन्छ, तपाइँ प्रम ट्रंकमा राख्नुहुनेछ। केवल यदि फोल्डिंग पछि आकार सानो छ, तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो सुविधाजनक छ।
प्रमको वजन पनि विचार गर्न एक कारक हो। कहिलेकाँही तपाईंले बच्चालाई आफूसँगै लैजानुपर्नेछ, जस्तै तपाईं तलको तलाउमा वा भीडभाड ठाउँहरूमा जाँदा, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि हल्का स्ट्रोलर किन्नु कति बुद्धिमानी हुन्छ।
केही बच्चा क्यारीएजहरूले आन्तरिक संरचना परिवर्तन गर्न सक्दछन्, जस्तै बैठेर वा झुटो। जब सुत्न, बच्चाको गाडी एउटा सानो लामखुट्टेले ढाकिएको छ। यदि यो सकियो भने, शिशुको अगाडि ट्याब्लेट हुन्छ, जुन सानो टेबुलसँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ, ताकि तपाईं बोतललाई आदि राख्न सक्नुहुन्छ।
A. सहायक डिजाइन
केही बच्चा क्यारीएज उचित डिजाइन गरिएको छ। उदाहरण को लागी, धेरै मानवीय डिजाइनहरु छन्। त्यहाँ स्थानहरू छन् जहाँ झोलाहरू ह्या hung्ग गर्न सकिन्छ, र बच्चाका आवश्यक वस्तुहरूका लागि ठाउँहरू, जस्तै दुधको बोतलहरू र शौचालय कागजहरू। यदि त्यहाँ त्यस्ता डिजाइनहरू छन् भने, यो बाहिर जान अधिक सुविधाजनक हुनेछ।
एक stroller छनौट गर्दा, तपाईं पा whe्ग्रा संख्या, पा the्ग्रा को सामग्री, पा the्ग्रा व्यास, र कार को मोड मा, र यो लचिलो अपरेट गर्न सजिलो छ कि छैन हेर्नु पर्छ।
किनभने बच्चाको छाला अधिक नाजुक छ, तपाईंले बच्चाको गाडी छान्दा कारको बाहिरी सतह र बिभिन्न किनारहरू र कुनामा हेर्नुपर्नेछ। तपाईंले अधिक सहज र चिल्लो सतह छनौट गर्नुपर्नेछ, र ठूला किनाराहरू र अनसम्थ कार सतहहरू हुनुहुन्न, ताकि बच्चाको नाजुक छालामा चोट नपरोस्।